Uchishandisa jQuery kuJuice Up Yakajairika Webhu Peji | Martech Zone
Uchishandisa jQuery kuJuice Kumusoro Wakajairika Webhu Peji
Chitatu, Kurume 18, 2009 Svondo, Kukadzi 17, 2013 Douglas Karr
jQuery yaingoita hunyengeri.
Tsvaga jQuery + chero chinhu, uye iwe uchaonawo kuti vanogadzira vavaka mhinduro, dzinonzi plugins, dzakagadzirira kuenda! Mune ino kesi, ini ndakaita kutsvaga kwe "jQuery carousel" uye ndikawana inonakidza, yakazara jQuery carousel mhinduro paDynamic Drive.
Chimwe chinhu chakanaka nezve jQuery ndechekuti ndizvo kodhi ikozvino inogarwa neGoogle. Nekuda kweizvozvo, haufanire kuisa jQuery kune yako server, uye havaiti kuti vaverengi vewebhusaiti yako vaifanira kurirodha nguva dzese. Kana ivo vakave kune imwe saiti ine revo yejQuery, inozvigadzirirwa yega kuti ishandiswe neyako saiti!
Ingo wedzera kodhi iri mukati memusoro wako tag uye iwe wabva uye unomhanya nejQuery:
Kuti ndimhanye iyo carousel, ini ndaifanira kurodha pasi uye kunongedzera iyo stepcarousel script:
Mushure meizvozvo, kugadzirisa peji racho kwaive nyore! Ini ndakaisa carousel yangu mukati me div inonzi mygallery uye tambo ye panels mukati me div inonzi bhandi. Ini ndobva ndawedzera diki chunk yemasethingi kodhi mukati memuviri wangu tag.
Unogona kugadzirisa zviito zvishoma. Mune ino kesi ini ndakagadzirisa iwo script kuti amhanye otomatiki kana iro peji rakatakura. Ndakagadzirisa kumhanya uye nekureba kunoratidzwa neparutivi rega rega, pamwe nemabhatani ekutenderedza iwo mapaneru kuruboshwe uye kurudyi. Chimwe chinhu chinotonhorera cheiyi plugin - paunosvika kune yekupedzisira pani, iyo kudzorera shure dzokera kune yekutanga!
Darika Iyo Yakatangazve uye neJob Fair
Ndiri kuvakazve webhusaiti yangu uye ndichivavarira kuvhurwa vhiki rino kana zvese zvikafamba mushe. Ndiri kushandisa jQuery yezvishoma zvacho uye handina zvichemo kusvika parizvino. Zvese zvinoita sekunge zviri kupa iyo "webhu 2.0" kunzwa uye netariro ichazongorumbidza iyo yakapera saiti.